Ob. Lammaa Magarsaatti Iyyannee deebii dhabne: Manguddota Mayyuu Mulluqqee - OMN
Ob. Lammaa Magarsaatti Iyyannee deebii dhabne: Manguddota Mayyuu Mulluqqee
(Mayyuu Mulluqqee , Oromiyaa, Waxabajj 13,2017) – Manguddoonni aanaa Mayyuu Mulluqqee lafatu nu jalaa saamame jedhu. Dhimma kana piresdaantii Oromiyaa obboo Lammaa Magarsatti iyyannus fala dhabneerra jedhan.
Jiraattonni Araddaalee sagal irraa kaafaman wayta ammaa rakkoo keessa jiru.
Godina Harargee bahatti Aanaa Mayyuu Mulluqqee weeraramtee turte ilaalchisuun manguddoonni naannichaa gara waajjira piresdaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa deemanii iyyatanis furmaata dhabuudhaan ufirra deebi’aniiru.
Jiraattoonni araddaaleen sagal irraa fudhatamee jiru wayta ammaa rakkoo hamaa keessa jiraachuullee dubbatan.
Godina Harargee bahatti aanaaleen jaha weerarama bulchiinsa naannoo Somalee jala galuun ni yaadatam.
Isaan keessaa aanaan Mayyu Mulluqqee takka. Aanaa Mayyuu Mulluqqetti ammoo araddaaleen sagal guutumatti weerara humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin yoo qabamtu ilmaan Oromoo qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifamanii jiru.
Weeraramiinsa lafa isaanii wayta ammaa bulchiinsa naannoo Somaalee jala galee jirtu ilaalchisuun guyyaa dheengaddaa manguddoonni hawaasa aanichaa bakka bu’an gara magaalaa Finfinnee waajjira piresdaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaatti iyyachuuf imaluu isaanii gabaasuun keenna ni yaadatama.
Haata’u malee iyyannaa fi imimmaan manguddoota Oromoo kanaaf qaamni gurra kennuu dhabameera.
Mangudoota keessaa nama tokko dubbifnee akka jedhanitti ‘’dachee Oromiyaa wayta ammaa weearamtee jirtu deebifachuuf jecha gara Magaalaa Finfinnee deemnee turre.
Qaamonni nu dubbisan iyyannoo keenna nurraa fuudhanii deemaa jedhan malee fala nuuf kennan hin jiru.
Nutis fala waan dhabneef ammaan kana ufirraa deebinee jirra. Fallis waan hin argamneef caarraan nuti qabnu hin jiru jedhan.
Weerartoonni kunniin ammas bifa haaraan araddalee biroo qabachuun manniin itti ijaarataa akka jiranis namni kun himan.
Wayta waajjira bulchiisna Oromiyaa deemnee obboo Lammaa Magarsaa dubbisuuf yaaletti itti hin milkoofne kan jedhan namni kun, gara qe’ee dhaloota keenyatti deebi’uuf ammoo dacheen teenya weerarmtee jirti.
Manguddoonni Oromoo erga lafti isaanii jalaa weerarmtee booda gara waajjira piresdaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa deemanii iyyatanis qaamni isaan keessummeessu dhabamuudhaan fala tokko malee ufrra deebi’uu manguddoonni kunniin OMN tti himan.
Mangudoonni kun akka jedhnitti ‘’qe’een dhaloota akaakilee fi abaabilee irraa nutti darbe dhaloota keenya keessatti weeraramee jira. Hardha alaabaa naannoo shanittu gubbaa balali’aara. Qabeenyi keenyas weerartoota kanaan saamameera.
Jiraattonni araddaalee sagal guutuu qe’ee keenyarraa baqachuudhaan aanaalee biroo keessa facaanee jiraataa jirra. Nuti abbaan biyyaa qe’ee handhuurti teenya itti buute irraa baqannee lammii lammataa taanee jirra. Rakkoo kanaaf qaamni fala nuuf kennu dhabameera jedhan.’’
Dhimma kana ilaalchisuun OMNs waajjira piresdaantii Oromiyaa dubbisuuf yaalii taasifneti hin milkoofne.
Aanaa Mayyuu Mulluqqee tan kaleessa Oromiyaa taatee jirtu hardha bulchiinsi naannoo Somaalee qabiyyee naannoo isaa taasifachuuf amoommataa jira.
Bulchiinsi Mootummaan Naannoo Somaalee aanaa Mayyuu Muluqqeetti humna Addaa poolisii naannichaa itti bobbaasuun, araddalee 9 kan weerare baatiilee lamaan darban keessa ture. Araddaalee kana mara irraa jiraattonni qe’ee fi qabiyyee lafa isaaniirraa buqqifimaniiru.
Lafa baldhaa kanarratti mootummaan naannoo Somaalee baajata ramaduun hujiilee eegaleera.
Hardha garuu Pirojeektiiwwan misoomaa dabalatee, manniin jireenyaa itti ijaaratanii keessa jiraachaa kan jiran jiraattota bulchiinsa naannoo Somaaleti.
Manguddoonni sagal aanaa Mayyuu Mulluqqee walitti qabamuun kana dura gara magaalaa Harar deemanii rakkoo kana itti iyyatanis furmaata dhabaniiru.
Haaluma wal fakkaatunis magaalaa Finfinnee waajjira piresdaantii Oromiyaa deemanii iyyatani qaamni rakkoo isaanii kanaaf xiyyeeffannaa kenne hin argamne.
Manguddoonni Oromoo hawaasa aanaa Mayyuu Mulluqqee bakka bu’uun biyya isaanii jalaa weerarame deeffachuuf qaama hoongayetti iyyatanis itti hin milkoofne.
Barsiisonni Shaambuu mormii jabaan ka’uu mala jedhan
OMN: English News (June 14, 2017)